Qaxootiga diidmada haysta oo caqabad ay la soo gudboonaatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxootiga diidmada haysta oo caqabad ay la soo gudboonaatay
Dhibaato ku soo fool leh qaxootiga diidmada haysta
La daabacay tisdag 24 maj 2016 kl 15.30
Xeerarka magan-gelyo-doonka ee la adkeeyey ayaa hor-seedi doona welwel khilaafyada ka dhaca xeryaha soo-galootigu ku dhaqan yihiin, sida ay sheegeen hayadda socdaalka iyo maamullada shirkadaha gacanta ku haya xeryaha soo-galootiga.
Laga bilaabo koowda bisha juun ayuu hir-geli doonaa xeer ey soo-galootigu diidmada dalabaadkoodii ku helay ku waayeyaan hooy iyo dhaqaalihii taageerada ee la siin jirey. Bert Karlsson, ahna mulkiilaha dhowr xeryo qaxooti ee goobo kala duwan ee dalka ku yaala ayaa aad uga soo hor-jeeda xeerarka lagu adkeeyey soo-galootiga, isagoona sheegay inay xeryaha soo-galootiga ay ka abuurayso xaalad wel-wel iyo khilaaf.
- Waa mid la hubo, adiguna aad garan karto in haddii dibadda la dhigo soo galootiga cunno iyo hooy la'aan ay tahay xaalad adag!
Qiyaastii 1500 oo ruux ayaa maanta ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee hayadda socdaalka ee nawaaxiga Östergötland oo uu xeerkan la adkeeyay qabanayo. Sverker Spaak, ahna sarkaal ka howl-gala hayadda socdaalka ayaa sheegay inay 1500 e ruux ey ka mid yihiin dadyoow muddo hore diidmo ku heley dalabkoodii magan-gelyo doon.
- Maadaama aanay hayadda socdaalku khasab ugu celin karin iyaguna aaney gacan ka geey-san sidii ey si aan khasab ahayn waddammadoodii dib ugu noqon lahaayeen ayaa ugu wacan iney ku nagaadaan xeryaha soo-galootiga.
Iminka waxaa la rajeeyn in shuruucda lagu adkeeyey daraadeed iney go'aansadaan sidii ey waddammadoodii dib ugu laaban lahaayeen. Halka uu Sverker Spaak dhanka kale ka cabsi qabo inay dhici karto wel-wel inuu xeerkan la adkeeyay uu ka abuuri karo xeryaha soo-galootiga dhexdooda.
- Waxaan aamin-sanahay in Bert Karlsson uu sax-san yahay. Hase yeeshee waannu u diyaar-garoowney inuu xeerkan la adkeeyey welwel abuuri karo kolka uu hir-galo. Sidoo kale waa arrin aannu kala xaajooney ciidanka ammaanka haddii ay wax dhacaan.